यो ठाउँमा लाग्यो टिकटक बनाउनेको भीड, बीच सडकमै भिडियो बनाउँदा दुर्घटनाको बढ्यो जो खिम – Classic Khabar
September 1, 2021 146
टिकटकमा भाइरल बन्ने लोभले युवायुवतीले अनेकन क्रियाकलाप गरिरेहका हुन्छन् । कोही नदीको किनारमा त कोही बीच सडकमै आफ्ना नृत्य र अभिनय देखाउँछन् । युवायुवती मात्र हैन, प्रौढ, वृद्धवृद्धा र केटाकेटी सबै आफ्नो चर्चा होस् भन्ने चाहन्छन् ।
Prevमाधव नेपालले गोबिन्द बन्दीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका हुन् ? देउवाले जब कांग्रेस बैठकमा यस्तो भने
Next२०७८ साल भदौ १६ गते बुधबार, दिनमा तपाईलाई कस्तो ? आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल जानकारी लिनुहोस ग्रहगोचर, शुभ अशुभ, मायाप्रेम सहितको दैनिक राशिफल